ऊर्जा भएकोमा बधाई
को व्यावसायिक छुट्टी डिसेम्बर बीस-दोस्रो - धेरै छोटो डेलाईट घण्टामा वर्ष को अन्त, नजिकै एक लामो समय बिन्दु लागि आफ्नो ऊर्जा। तिनीहरूले मजा संगठित नयाँ वर्ष कर्पोरेट दल लागि तयार अघि।
शक्ति ईन्जिनियरहरु को कठिन र खतरनाक काम, यसको महत्त्व छैन overemphasized गर्न सकिन्छ। हाम्रो घरमा सान्त्वना प्रदान, प्रकाश र गर्मी - आफ्नो दैनिक अथक काम महत्त्वपूर्ण लाभ को पहिलो सिर्जना गर्न।
यो दिन जब यो 23 मई मा मनाइन्छ, 1966 मा फिर्ता देखियो। त्यही दिन, सबै सहकर्मी प्रत्येक अन्य बधाई ऊर्जा गर्न तयार थिए।
यो सबै गर्ने कहिल्यै सिर्जना, ऊर्जा प्रणाली र सुविधा को मर्मतका र मरम्मत संलग्न छन् मानिसहरूको उत्सव हो। को लागि बधाई पावर ईन्जिनियर 'दिन लगातार पेशामा को प्रतिनिधिहरु पाए।
डिसेम्बर 22 - आधिकारिक छुट्टी मिति द्वारा अनुमोदित।
यो दिन धेरै वर्ष पुरानो परम्परा अनुसार उद्योग को सबै भन्दा राम्रो उच्च पुरस्कार र विभिन्न डिप्लोमा, साथै आश्चर्य र उपहार प्रशंसा गर्छौं। ऊर्जा बधाई हँसिलो वर्ण हो। "प्रिय ऊर्जा: सबै उज्ज्वल छुट्टी इच्छा सबैभन्दा सान्दर्भिक र लोकप्रिय आज चयन गर्न सक्नुहुन्छ को, यहाँ एउटा नमूना पाठ हो! कृपया सधैं हरेक घरमा राख्न प्रयास र हरेक परिवार न्यानो र ज्योति थियो! "।
यी मानिसहरू को हुन्, तिनीहरूले पनि किन चाहिन्छ? पूर्ण र ठूलो विस्तार मा कल्पना गर्न र यी प्रश्नहरूको जवाफ गर्न, साथै बुझ्न किन यो यति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण पेशा छ क्रममा, यो शक्ति आउटएज घरमा सम्झन गर्न पर्याप्त छ। टिभी काम गरेन, कुनै हल्का, कुनै पकाउने चुलो - घर धेरै नीरस र असहज हुन्छ। माइक्रोवेव ओवन त्यहाँ सेल फोन चार्ज गर्न केही छ, काम गर्दैन, र त्यहाँ छ कुनै ठाउँ ... ठीक छ, हामी घरमा हुनुहुन्छ, र, अस्पताल, पसलहरूमा आदि के भइरहेको छ? सबै काम बिजुली बिना रोक्छ!
त्यसैले ऊर्जा दिन छुटेका गर्न! तपाईं मित्र बीच पक्कै गतिविधि यस प्रकारको गर्न नजिकबाट सम्बन्धित छन् जो मानिसहरू हुन्। तिनीहरूलाई ऊर्जा बधाई चयन गर्नुहोस्, र समय लिन निश्चित हुन। तिनीहरूले साथै हामी सबै हल्का रूपमा आवश्यक छ!
ऊर्जा सहयोगिहरु बधाई आवश्यक छैन पद फारममा, आफूलाई रचना गर्न सक्नुहुन्छ।
यो ऊर्जा (हास्य) मा अग्रिम बधाई मा तयार राम्रो छ। उदाहरणका लागि, एक हास्यास्पद कविता:
हामी तपाईंको व्यक्तिको पेशा भूल छैन -
घर को प्रकाश मा तपाईं को मान्छे हो,
Energetikov तेजी बधाई छ,
र प्रत्यक्ष सँगै खुसीसाथ इच्छा!
मा काम - सधैं नयाँ विकासक्रम,
पूरा इच्छा पक्का हुन!
प्रकाश, शान्ति र स्वास्थ्य बलियो छ -
त्यो तपाईं सुखी र सजिलो बस्ने !!!
ऊर्जा मा पकाउने बधाई छ, तपाईं क्लासिक कुरा चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
बधाई छ, ऊर्जा!
र भन्न "धन्यवाद",
आफ्नो छुट्टी उज्ज्वल हुन सक्छ।
अपार्टमेंट मा गर्मी र प्रकाश को लागि
सबै दुनिया भर शहर!
यो तार मार्फत चल्छ
आफ्नो घर मा आनन्द!
वा यहाँ अर्को कविता छ:
आज शक्ति ईन्जिनियरहरु को दिन - डिसेम्बर 22,
र यो दिन त महत्त्वपूर्ण, र मेरो लागि र तपाईं को लागि छ हामी सबै थाहा छ।
प्रकाश र गर्मी, र तिनीहरूले मेरो र तपाईंको छन्, र हरेक घरमा हरेक,
त्यसैले आज सबै प्राण तिनीहरूलाई आफ्नो न्यानोपन साझेदारी पनि!
आज, सबैभन्दा-सबभन्दा छोटो वर्ष को दिन। र सबै रूपमा कहिल्यै अघि,
काम यी workaholic तुरुन्तै स्पष्ट र देखिने।
र अन्तमा बधाई र इच्छा साथ, आफ्नो आमा जस्तै
आनन्द, स्वास्थ्य। र मलाई विश्वास छ, हामी तपाईंलाई सबै कदर र तपाईँको हार्ड काम आदर! Urrrrrra!
यसलाई आफ्नो घर मा तार र आनन्द मार्फत चल्छ!
शक्ति ईन्जिनियर 'दिन - सिद्ध प्रकाश छुट्टी (शब्द सबै सचेत मा), त्यसैले तपाईंका साथीहरू र, हतारमा उनलाई बधाई गर्न उद्योग मा काम नातेदार बारे मा भूल छैन - तिनीहरूले खुसी हुनेछन्! ऊर्जा - धेरै हास्यास्पद मान्छे, र आफ्नो व्यावसायिक छुट्टी मा हिंड्न तिनीहरू सधैं हृदय छन् - कुनै एक संगठन जस्तै धेरै रचनात्मक, हँसिलो कर्मचारी पूरा हुनेछ।
सबै स्वाद को लागि जन्मदिन दल तरिका
कहिले र कसरी एलिजाबेथ को नाम दिन मनाउन?
सूट, कपडे र खिलौने: बालिका9वर्ष को लागि सबै भन्दा राम्रो उपहार।9वर्ष को लागि एक बच्चा उपहार कसरी चयन गर्न
मेला अप किंडरगार्टन मा एक परिदृश्य बनाउन
Purim - यो के हो? Purim को यहूदी छुट्टी। इतिहास र छुट्टी को सुविधाहरू
जीवन सेतो गैंडा। सेतो गैंडा अधिकतम वजन
कानुनी व्यवस्था र प्रकार को अवधारणा। समाज को कानुनी सिस्टम: अवधारणा र संरचना
हास्य अभिनेता एन्ड्रयू रडने जीवनी, परिवार र टिभीमा क्यारियर
सुविधा र लाभ: को रूसी उत्पादन चीनी माटो पानी फिल्टर
नागरिक विवाद। विवाद बसोबास लागि पूर्व-परीक्षण प्रक्रिया
शुरुआती, ढाँचाको लागि मास्टर वर्ग: को कपडा देखि आफ्नो हातमा Potholder
शिक्षा र उपन्यास "पिता र छोराहरू" मा Bazarov को प्रशिक्षण। नायक को विशेषताहरु
रूसी इतिहासको सन्दर्भमा व्लादिमीर प्रान्त
एम सी "ताल" (उलानबातार-Ude): विवरण, प्रोफाइल
सानो मिलाउने: केबिन ढोका VAZ-2114 र मात्र
आफ्नो कम्प्युटर को प्रदर्शन कसरी वृद्धि गर्न। चाल पढन्तेहरूका